Guddi isku dhaf ahaa oo ka kala socday Xukuumadda & Baarlamaanka Somaliya, ayaa waxay gaareen Degmada Beled Xaawo Ee Gobolka Gedo – STAR FM SOMALIA
Guddi isku dhaf ahaa oo ka kala socday Xukuumadda & Baarlamaanka Somaliya, ayaa waxay gaareen Degmada Beled Xaawo Ee Gobolka Gedo
Guddi isku dhaf ahaa oo ka kala socday Xukuumadda & Baarlamaanka Somaliya, ayaa waxay maanta gaareen Degmada Beled Xaawo Ee Gobolka Gedo, iyagoona qiimeen ku soo sameeyay Koonfurta Degmadaasi, oo ku beegan xuduuda labada dal.
Guddigan oo uu horkacaayay Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhiga Somaliya, General C/qaadir Sheekh Cali Diini, ayaa maanta ka amba baxay Magaalada Muqdisho, waxayna diyaarad ku taggeen Degmada Doolow, halkaasoo ay safar dhinaca dhulka ah kaga soo tallaabeen Degmada Beled Xaawo.
Guddigu waxay soo kormeereen Koonfurta Degmada Beled Xaawo oo sida la sheegay ay Kenya ka waday dhisme darbe, iyadoo markaasi ka soo gudubtay halkii ay ku beegneyd xuduuda labada dhinac.
Gudoomiyaha Guddiga Difaaca Baarlamaanka Somaliya, Xuseen Carab Ciise, ayaa sheegay in ay si wanaagsan qiimeen ugu soo sameeyeen xuduuda, hadana ay dib ugu laabteen Degmada Doolow, oo ay caawa ku hooyanayaan.
Guddigan oo lagu wado in ay dib ugu laabtaan Magaalada Muqdisho, ayaa warbixin ka samayn doono qiimeentooda, iyagoona dib ula wadaagi doono Xukuumadda iyo Baarlamaanka.
Guddiyada Arrimaha Dibadda & Gudaha Baarlamaanka Somaliya oo qayb ka ahaa Guddigan isku dhaf ah, ayaa sharci rasmi ah ka soo saari doono tallaabada, ay Kenya ugu soo xadgudubtay qaybo ka mid ah dhulka Somaliya.
Kenya oo dareentay in shacabka Somaliyeed ay qaraar adag ka qaateen xadgudubkaasi, ayaa waxay bilowday joojinta derbigii, ay qorsheyneysay in ay hirgeliso meel aan ahayn xadka.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in Al-Qaacida iyo kooxda dowladda islaamiga IS ay yihiin xoogag shayaadiin ah